Le jorunal du 24 mars 2022 - Studio Sifaka - Actu, musique, conseils et débats pour les jeunes à Madagascar
Les trois jeunes malgaches participant au débat inter-universitaire de l'Océan Indien.
OBSMADA : fomba ara-drazana no namahana ireo disadisa.
Fifaninana ady hevitra teo amin’ny Oniversiten’ny Ranomasimbe Indiana, faha-3 i Madagasikara.
Fiakaran’ny vidin’entana : Hisy ny famerana izany ho ’ny ministeran’ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana.
Miandrivazo : nizarana fahazoandalana hitrandraka ireo mpanjono 70 mivondrona anaty fikambanana ao amin’ny kaominina Ankotrofotsy.
Studio Sifaka · 2022 - 03 - 24 NY VAOVAO